Usoro na ọnọdụ-kichin fosets, ite filler fosets, ụlọ ịsa ahụ fosets | WOWOW
Home / Usoro na ọnọdụ
Ndị otu www.wowowfaucet.com na-arụ ọrụ na webụsaịtị a. N'ime webusaiti ahụ, okwu a “anyị”, “anyị” na “anyị” na-ezo aka na otu www.wowowfaucet.com. www.wowowfaucet.com na-enye weebụsaịtị a, gụnyere ozi niile, ngwaọrụ na ọrụ dị na saịtị a n'aka gị, onye ọrụ, dabere na ịnakwere usoro, ọnọdụ, atumatu na ọkwa niile ekwuputara ebe a.
Site na ịga na saịtị anyị na / ma ọ bụ zụta ihe n'aka anyị, ị tinyere aka na "Ọrụ" anyị ma kwenye na ị ga-agbaso usoro na ọnọdụ ndị a ("Usoro na ọnọdụ", "Okwu"), gụnyere usoro ndị ọzọ, ọnọdụ na atumatu ndị ahụ. zoro aka na ebe a na / ma obu odi site na hyperlink. Usoro a na ọnọdụ ndị a metụtara ndị ọrụ niile nke saịtị ahụ, gụnyere ndị na-enweghị mmachi ndị na-eme nchọgharị, ndị na-ere ahịa, ndị ahịa, ndị ahịa, na / ma ọ bụ ndị na-eweta ọdịnaya.
Biko gụọ Usoro na ọnọdụ ndị a nke ọma tupu ịbanye ma ọ bụ jiri weebụsaịtị anyị. Site na ịnweta ma ọ bụ jiri akụkụ ọ bụla nke saịtị ahụ, ị ​​kwenyere na iwu ndị a na Usoro. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na usoro na ọnọdụ niile nke nkwekọrịta a, mgbe ahụ ị gaghị enwe ike ịnweta weebụsaịtị ma ọ bụ jiri ọrụ ọ bụla. Ọ bụrụ na a na-ewere Usoro na Ọnọdụ ndị a dị ka onyinye, nnabata ga-ejedebe na Usoro na Ọnọdụ ndị a.
Ihe ọ bụla ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla agbakwunyere na ụlọ ahịa dị ugbu a ga-edo onwe ya n'okpuru Usoro na Ọnọdụ. Nwere ike nyochaa ụdị dị ugbu a nke usoro na ọnọdụ n'oge ọ bụla na ibe a. Anyị debere ikike iji melite, gbanwee ma ọ bụ dochie akụkụ ọ bụla nke usoro a na ọnọdụ site na ịpị mmelite na / ma ọ bụ mgbanwe na weebụsaịtị anyị. Ọ bụ ọrụ gị ịlele ibe a oge ụfọdụ maka mgbanwe. Continuednọgide na-eji ma ọ bụ ịnweta weebụsaịtị na-eso mgbasa ozi nke mgbanwe ọ bụla pụtara ịnakwere mgbanwe ndị ahụ.
Site na ikwenye na Usoro na Ọnọdụ ndị a, ị gaghị eji ngwaahịa anyị maka iwu ọ bụla na-akwadoghị ma ọ bụ na-enwetaghị ikike ma ọ bụ na ị, na ojiji nke Ọrụ ahụ, mebie iwu ọ bụla na ikike gị (gụnyere mana ejedebeghị na iwu nwebisiinka).
Nkeji nke 3 - Izi ezi, Mmezu na oge nke ozi
Maka nkọwa ndị ọzọ, biko nyochaa nnwere onwe anyị.
Anyị nwekwara ike, n’ọdịnihu, nye ọrụ na / ma ọ bụ atụmatụ ọhụụ site na weebụsaịtị (gụnyere, ntọhapụ nke ngwaọrụ na akụrụngwa ọhụụ). Featuresdị ọrụ na / ma ọ bụ ọrụ ọhụrụ a ga-edo onwe ha n'okpuru Usoro na Ọnọdụ ndị a.
Nkeji edemede 9 - NKWUKWU ND US NA-EGO, NT FETA NA ND OTHER ỌZỌ ỌZỌ
Anyị nwere ike, mana enweghị ọrụ anyị, nyochaa, dezie ma ọ bụ wepu ọdịnaya anyị kpebiri na naanị uche anyị bụ iwu na-akwadoghị, mkparị, iyi egwu, enweghị ntụkwasị obi, nkwulu, ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ, okwu rụrụ arụ ma ọ bụ ihe ọ bụla na-adịghị mma ma ọ bụ na-emebi ihe ọgụgụ isi nke ndị ọzọ ma ọ bụ Usoro ndị a na ọnọdụ .
Ntinye ntinye nke ozi nkeonwe site na ụlọ ahịa na-achịkwa Nzuzo Nzuzo anyị.
NKEBI NKE 11 - NJỌP ,R,, EZIOKWU NA OMUME
Na mgbakwunye mmachibido iwu ndị ọzọ edepụtara na Usoro na Ọnọdụ, amachibidoro gị iji saịtị ahụ ma ọ bụ ọdịnaya ya: (a) maka nzube iwu na-akwadoghị; (b) ịrịọ ndị ọzọ ka ha mee ma ọ bụ sonye na iwu ọ bụla na-akwadoghị; (c) imebi iwu, usoro, iwu, ma ọ bụ iwu obodo ọ bụla; (d) imebi ma obu mebie ikike ikike amamihe anyi ma obu ikike nke ikike nke ndi ozo; (e) iji kpasuo mmadụ iwe, mkparị, mkparị, mmebi, nkwulu, nkwutọ, nleda anya, iyi egwu, ma ọ bụ ịkpa oke dabere na okike, nghazi mmekọahụ, okpukperechi, agbụrụ, agbụrụ, afọ, obodo, ma ọ bụ nkwarụ; (f) ndisuan ntọt abian̄a m̀m or abian̄a owo; (g) ibugo ma ọ bụ bufee nje ma ọ bụ ụdị ọ bụla nke koodu ọjọọ ọ bụla ma ọ bụ nke enwere ike iji mee ihe ọ bụla ga-emetụta ọrụ ma ọ bụ ọrụ nke Ọrụ ma ọ bụ nke weebụsaịtị ọ bụla metụtara ya, weebụsaịtị ndị ọzọ, ma ọ bụ Internetntanetị; (h) ichikota ma obu ichota ihe omuma nke ndi ozo; (i) iji spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, ma ọ bụ ịchacha; (j) maka ebumnuche rụrụ arụ ma ọ bụ omume rụrụ arụ ọ bụla; ma ọ bụ (k) igbochi ma ọ bụ gbasaa atụmatụ nchebe nke Ọrụ ma ọ bụ weebụsaịtị ọ bụla metụtara ya, weebụsaịtị ndị ọzọ, ma ọ bụ Internetntanetị. Anyị nwere ikike ịkwụsị iji Ọrụ gị ma ọ bụ weebụsaịtị ọ bụla metụtara ya maka imebi nke ọ bụla amachibidoro iwu.
Ọ bụrụ na anyị emeghị ka anyị, ndị nduzi anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ, ndị ọrụ ụlọ ọrụ, ndị ụlọ ọrụ, ndị na-eweta ọrụ, ndị na-enye ọrụ ma ọ bụ ndị ikikere nwere ike ịdaba maka mmerụ, ọnwụ, nkwupụta, ma ọ bụ ihe ọ bụla, kpọmkwem, ihe ọ bụla dị mma, gụnyere, na-enweghị njedebe uru furu efu, ego efu, ego furu efu, njedebe nke data, ụgwọ ịkwụsị, ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri emebi, ma ọ bụ ịdabere na nkwekọrịta, mmebi (gụnyere nleghara anya), ọrụ siri ike ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, eji ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla na-eji ọrụ ahụ, ma ọ bụ maka nkwupụta ọ bụla ọzọ metụtara n'ụzọ ọ bụla maka iji ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla, gụnyere, ma ọ bụghị njedebe na, ọ bụla njehie ma ọ bụ ihe ọ bụla na ihe ọ bụla, ma ọ bụ ọnwụ ma ọ bụ mmebi nke ụdị ọ bụla e mepụtara n'ihi ọrụ nke ọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla (ma ọ bụ ngwaahịa) ezitere, transmitted, ma ọ bụ nke ọzọ mepụtara site na ọrụ ahụ, ọ bụrụgodị na ọ gwara ha ihe ha ga-eme. N'ihi na ụfọdụ na-ekwu ma ọ bụ ndị ọchịchị anaghị ekwe ka mwepụ ma ọ bụ njedebe nke ọrụ maka ọdachi ma ọ bụ ọdachi, na ụlọnga ma ọ bụ ikike ndị a, ibu ọrụ anyị ga-ejedebe na iwu kachasị oke.
Agree kwenyere ịkwụ ụgwọ, chebe ma jide anyị na nne na nna anyị, ndị enyemaka, ndị mmekọ, ndị mmekọ, ndị isi, ndị isi, ndị isi, ndị ọrụ, ndị ọrụ ngo, ndị ikikere, ndị na-enye ọrụ, ndị na-arụ ọrụ n'okpuru, ndị na-eweta ọrụ, ndị ọrụ na ndị ọrụ, na-adịghị njọ site na nkwupụta ọ bụla ma ọ bụ ọchịchọ, gụnyere ihe ezi uche dị na ya feesgwọ ndị ọka iwu, nke ndị ọzọ mejupụtara n'ihi ma ọ bụ na-esite na ngabiga nke iwu na ọnọdụ ndị a ma ọ bụ akwụkwọ ha tinyere site na nrụtụ aka, ma ọ bụ mmebi iwu ọ bụla ma ọ bụ ikike nke ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ndokwa ọ bụla nke usoro na ọnọdụ ndị a kpebisiri ike ịbụ iwu na-akwadoghị, enweghị isi ma ọ bụ na-enweghị ike ịmanye ya, ụdị ndokwa a ka ga-arụ ọrụ nke iwu zuru oke nabatara, a ga-ewere akụkụ ahụ na-enweghị ike ịhapụ ya na usoro ndị a. Ọnọdụ, mkpebi siri ike a agaghị emetụta ndaba na ịmanye nkwado nke usoro ndị ọzọ fọdụrụnụ.
Usoro a na-arụ ọrụ ọ gwụla ma ma ị ga-akwụsị ma ọ bụ gị ma anyị. You nwere ike ịkwụsị Usoro na ọnọdụ ndị a n'oge ọ bụla site na ịgwa anyị na ị chọghị iji Ọrụ anyị ọzọ, ma ọ bụ mgbe ị kwụsịrị iji saịtị anyị.
Ọ bụrụ n ’ikpe ikpe anyị ị dara, ma ọ bụ na anyị na-enyo enyo na ị daa, ịdebe usoro ọ bụla ma ọ bụ nkwenye nke usoro na ọnọdụ ndị a, anyị nwekwara ike ịkwụsị nkwekọrịta a n’oge ọ bụla na-enweghị ọkwa, ị ga-aza ajụjụ maka ego niile ruru. ruo na gụnyere ụbọchị nkwụsị; na / ma ọ bụ ya nwere ike ịgọnahụ gị ịnweta Ọrụ anyị (ma ọ bụ akụkụ ọ bụla).
Ghara ịda iwu ma ọ bụ mezuo ikike ọ bụla ma ọ bụ nkwenye nke usoro a na ọnọdụ a agaghị abụ wepụrụ ikike ma ọ bụ nkwenye dị otú ahụ.
Usoro a na ụkpụrụ ọ bụla ma ọ bụ iwu ọrụ ọ bụla nke anyị zigara na saịtị a ma ọ bụ maka Ọrụ ahụ bụ nkwekọrịta na nghọta niile dị n'etiti gị na anyị ma na-achịkwa ojiji nke Ọrụ ahụ, na-etinye nkwekọrịta ọ bụla ma ọ bụ nke ọ bụla dị na mbụ, nkwukọrịta na atụmatụ. , ma obu nke edere ede ma obu edere edere, n'etiti gi na anyi (gunyere, ma o bughi na uzo ndi TERMS NA CONDITIONS).
Agaghị enwe nghọta ọ bụla dị na nkọwa nke usoro a na ọnọdụ ndị ọzọ maka ndị na-edepụta ya.
Usoro a na nkwekọrịta ọ bụla dị iche iche anyị na-enye gị Ọrụ ga-achịkwa ma rụọ ya dịka iwu nke UK.
Nkeji edemede 19 - Ngbanwe nke usoro na ọnọdụ
Nwere ike nyochaa ụdị dị ugbu a nke usoro na ọnọdụ n'oge ọ bụla na ibe a.
Anyị debere ikike, naanị otu uche anyị, imelite, gbanwee ma ọ bụ dochie akụkụ ọ bụla nke Usoro na Ọnọdụ ndị a site na ịpị mmelite na mgbanwe na weebụsaịtị anyị. Ọ bụ ọrụ gị ịlele weebụsaịtị anyị kwa oge maka mgbanwe. Continuednọgide na-eji ma ọ bụ banye na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ Ọrụ na-eso ngbanwe nke mgbanwe ọ bụla na Usoro ndị a na nkwenye nke mgbanwe ndị ahụ.